अमेरिकाको कोलोराडोमा तेस्रो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड २०१८ भब्यताको सम्पन्न (फोटो फिचर सहित)
अमेरिका । तेस्रो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड २०१८ सम्पन्न भएको छ । अमेरिकाको कोलोराडोस्थित डेनबर शहरमा शनिबार राती भव्य समारोहबीच सम्पन्न सो अवार्ड समारोहमा यसपटक सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड फिल्म भुईमान्छेबाट रमेश बुढाथोकीले प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै स्टार अफ द इयरको अवार्ड अभिनेता प्रदीप खड्काले हाँसिल गरेका छन् । उनको २०७४ मा प्रेम गीत २ र लिली बिली गरी दुबै फिल्म सफल भएको थियो ।
सो अवार्ड समारोहमा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड चलचित्र पञ्चायतबाट निता ढुँगानाले चुमिन । उनले यही विधामा अन्य अवार्ड पनि यो वर्ष जितेकी छिन् ।
ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड र नेपाल फिल्म सोसाइटीले सँयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सो समारोहमा सर्वोत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड २०७४ को ब्यबसायिक फिल्म छक्का पञ्जा २ ले पाएको छ । यही चलचित्रकी निर्देशक दीपाश्री निरौलाले सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड सो समारोहमा हाँसिल गरिन् । यस्तै सह अभिनेताको अवार्ड पनि चलचित्र छक्का पञ्पजा २ बाटै जितु नेपालले प्राप्त गरेका छन् भने सर्वोत्कृष्ट हास्य अभिनेताको अवार्ड पनि छक्का पञ्जा २ बाटै केदार घिमिरे (माग्ने बुढा)ले जिते । सर्वोत्कृष्ट छायाँकारको अवार्ड पनि चलचित्र छक्का पञ्जा २ बाटै पुरुषोत्तम प्रधानले हाँसिल गरेका छन् ।
कलाकार एवम् प्राविधिक बीच विभिन्न १२ विधामा ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जस अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट सह अभिनेत्रीको अवार्ड चलचित्र कृबाट रुपा रानाले जितिन् ।
संगीत तर्फको अवार्ड चलचित्र ऐश्वर्यको तिमी रोएको पल…ले हाँसिल गरेको छ । यो गीतबाट अर्जुन पोखरेले वर्षको सर्वोत्कृष्ट चलचित्र संगीतकारको अवार्ड र सुगम पोखरेलले वर्षको सर्वोत्कृष्ट चलचित्र गीत गायकको अवार्ड प्राप्त गरे ।
चलचित्र गीत गायिकाको अवार्ड चलचित्र पर्वको कले दाई…बाट गायिका मिना निरौलाले हाँसिल गरिन् ।
हेल्पिङ ह्यन्ड्स एण्ड हेल्थ एजुकेसन int’l प्रेसिडेन्ट नरायण श्रेस्ट र हलिउडका निर्देशक कलाकार एभ क्रुज प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो अवार्ड समारोहमा यस पटक ३५ औं संस्करणको अभियान श्री अवार्डबाट हास्य अभिनेता नारायण त्रिपाठी, निर्देशक सूर्य बोहरा, निर्देशक शुरेश दर्पण पोेखरेल र खेलाडी यज्ञलाल श्रेष्ठलाई सम्मानित गरियो । उनीहरुको योगदानको कदरस्वरुप यो अवार्डबाट सम्मानित गरिएको अभियान श्रीका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले बताए ।
दिवँगत दुई श्रष्टाको नाममा यही वर्ष स्थापना गरिएको स्वर्गीय श्री गेहेन्द्र धिमाल स्मृति सम्मान २०१८ बाट निर्देशक सूर्य बोहरालाई र श्री रामकेशर बोगटी स्मृति सम्मान २०१८बाट अभिनेता बिक्रान्त बस्नेतलाई कार्यक्रममा सम्मनित गरियो ।
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य ! कति पुग्यो त ?
आलेख ः पलायनले रित्तो बन्दैछ गाउँ